Ny karazany samy hafa mamotika ny karazana takelaka - Ellicott Dredges
Inona no atao hoe Dredge Cutter?
Ny fanapahana dia manondro ny karazana lohan'ny excavator toy ny cutterhead harona na bucketwheel amin'ny dredge pipeline hydraulic. Ny mpikapa dia mampiditra ny fihinana suction ary ampiasaina amin'ny fanapahana na fampitahorana ireo fitaovana enina dradradradraina.
Ireo mpanapaka dia manana fiasa fototra roa:
Ilay mpikarakara harona
Ireo mpikapa anaty harona dia miovaova amin'ny endrika, habeny, tendron'ny tenda, zoro ary ny fomba fametahana.
Mpanapaka harona nentim-paharazana dia mihazakazaka eo amin'ny faran'ny satrobon'ireo rojo anatiny ary mankany amin'ny efitrano fitohanan'ny fiara. Ny mpanapaka ny harona dia natao hamoronana fitaovana maimaimpoana amin'ny alàlan'ny fiarovana ny fivoahana hivezivezy tsy hifangaro amin'ny zavatra be loatra.
Ireo mpanapaka kitapo dia miasa amin'ny fampiharana maro isan-karazany. Ny halehiben'ny mpanapaka dia voafaritra na refy ho an'ny paompotan'ny dredge hanomezana ny habetsaky ny hery ambony indrindra amin'ny rafitry ny pumping dredge.
Ny seranam-piaramanidina Ellicott 370 sy 670 dredges mazàna no mameno miaraka amina fametahana harona misy mirefy 31.5 santimetatra (800 mm) ary ny mpanafika Series 43 Dragon® dia miaraka amin'ilay mpanafika Series 1,090 Dragon® izay misy mofomamy mirefy 1270 santimetatra (54 mm). . Ny halavam-bolan'ny cutter dia manana karazana haingam-pandeha voafetra sy hery manapaka.
Ireo mpanapaka kitapo dia mety ho fitaovana nify vaovao azo havaozina izay napetaka amin'ny fehin-kofehy mpanapetaka ho an'ny fangatahana henjana. Rehefa mitafy ny nify dia mety ho soloina mora foana.
Ny mpamorona boaty miendrika boaty Ellicott® voalohany namboarina dia nampidirina tamin'ny indostrian'ny fanodinana tamin'ny 1976. Ny vidim-pivarotana dia amidy amin'ny alàlan'ny singa manokana voatokana ary ampiasaina amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Ny vovo-doko somary sarotiny kokoa dia misy kodiarana mihodinkodina amin'ny siny tsy misy fotaka mifatotra amin'ny baomba aoriana. Mianjera ao amin'ny efitrano anatiny amin'ny kodiarana ny debris, mihetsika mivantana amin'ny fantsom-panafody amin'ny alàlan'ny vava mitsoka izay hita ao anaty kodiarana koa. Fampitaovana dia tsara ho an'ny fitaovana mavesatra ho an'ny fitaovana mafy, na manjaitra fotsiny amin'ny lafiny roa amin'ny fihodinana, afaka mifehy mineraly mavesatra ary manintona amin'ny lalana marina.
Ny afon-doha dia mifantoka amin'ny halehiben'ny vondron-tsoavaly tsirairay (HP) amin'ny halavany fohy isaky ny vondron'olona tsirairay, ka mamela ny kodiarana amin'ny siny dia manana telo heny noho ny fanapahana ny mpanapaka harona nentim-paharazana. Ny fikojakojana ny mpanondrana siny dia mety lafo be ary mitaky ny fampandehanana ny fantsom-pandehanana kely, izay lafo kokoa noho ny fomban-drazana mandeha amin'ny làlan-jaza nentim-paharazana. Na izany aza, amin'ny fampiharana sasany, dia mihena ny vidin'ny fahombiazan'ny dredge.
Ellicott Dredges, LLC dia manolotra kitapo sy tady amin'ny siny-marika amin'ny endrika sy habe samihafa. Raha mila fanazavana fanampiny momba ireo mpikapoka ny fanodinana, azafady mba hifandraisa aminay ianao sales@dredge.com na hamita ny antsika endrika tetikasa, ary hisy olona hifandray aminao tsy ho ela.